Faahfaahin Laga Helayo Qaraxyo Ka Dhacay Duleedka Balcad. – Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Qaraxyo Ka Dhacay Duleedka Balcad.
calamada June 25, 2018 2 min read
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax khasaara badan dhaliyay oo maanta ka dhacay deegaan katirsan gobolka Sh/dhexe ee duleedka Muqdisho.
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Balcad ayaa sheegaya in qarax miino lagu gubay gaari Cabdi bile ah oo uu lasocday sarkaal katirsan ciidanka Melleteriga Dowladda Federaalka iyo ciidamo ilaal u ahaa.
Qaraxa ayaa Burburiyay gaari Tikinika ah waxaana ku dhintay sedax askari oo ilaala u ahaa sarkaal isna dhaawacmay oo magaciisa lagusoo gaabiyay Cali Xuubeey.
Sarkaalka dhaawacmay oo xaaladdiisu tahay mid garaab ah ayuu qaraxu si daran uga waxyeelleeyay qeybaha sare ee jirkiisa wuxuuna ahaa taliyaha maleeshiyaadka ku sugan deegaanka Gololeey, maleeshiyaadkan ayaa bilo ka hor isaga cararay deegaanka Cali Fooldheere.
Saacad kadib markii markii qaraxa lagu burburiyay gaariga Ninka sarkaalka ah la socday ayaa qarax kale lala eegtay ciidamo katirsan AMISOM oo gurmad ahaan ugu socday goobta sarkaalka lagu qarxiyay.
Ugu yaraan 2 askari oo Burundeys ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxa Afar kalane dhaawacyo kasoo gaareen, diyaarad ka timid dhanka Muqdisho ayaa dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxyada udaabushay dhanka Xerada Xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada AMISOM ku leeyihiin Soomaaliya.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayay ku sheegatay mas’uuliyadda qaraxa lagu burburiyay gaariga Tiknikada ah, goob joogayaal ku sugan deegaanka Gololeey ayaa sheegay in ciidamo ka tagay Balcad ay gaariga burburay soo jiideen.
Wadada xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ayaa qarka usaaran in ay ka caagaan saraakiisha iyo mas’uuliyiinta DF-ka sababa laxiriira weerarada Al Shabaab oo joogta ka noqday.
Bishii lasoo dhaafay weerar ka dhacay duleedka Balcad ayaa lagu dilay 2 xildhibaan oo katirsan baarlamaanka maamulka isku magacaabay HirShabelle iyo 10 askari oo ilaala u ahaa.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 11-10-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 12-10-1439 Hijri.